उपचार गर्ने पैसा छैन ? ८ रोगका लागि यसरी लिन सकिन्छ आर्थिक सहायता – Saurahaonline.com
उपचार गर्ने पैसा छैन ? ८ रोगका लागि यसरी लिन सकिन्छ आर्थिक सहायता
चितवन, ०३ चैत । घरपरिवारको कोही सदस्य गम्भीर बिरामी पर्यो भने उपचार खर्चको जोहो कसरी गर्ने भनेर धेरैलाई सताइरहेको हुन्छ । कतिपय रोगको उपचार खर्च त आफ्नो हैसियतभन्दा बाहिर पनि हुन्छ ।
विपन्न हुनुहुन्छ र गम्भीर प्रकारको रोग लाग्यो भने एकपल्ट डाक्टरलाई सोधि हेर्नुहोस्, कतै सरकारले आर्थिक सहायता दिने रोगमध्येकै त होइन ?